Ny molotr'ity zazavavy ity dia nahavariana ny Internet manontolo, ary ho azonao izao ny antony!
Fihaonana - Jasmina Daniel no anarany, 25 taona monja izy ary efa voamarika sy niresadresaky ny mpiserasera an'arivony maro ny molony!
Tsia, ary tsy amin'ny endriny manokana na tsikisarira mahagaga izany, fa ny Jazzmina ihany no namorona ireny sangan'asa ireny izay hitanao tamin'ny fahitalavitra na tao amin'ny galerie teo aloha!
Ohatra, Audrey Hepburn ilay maherifo Audrey Hepburn tao amin'ny "Breakfast at Tiffany"!
Raha ny marina, ny fampisehoana amin'ny fisehoan-javatra rehetra, dia nentina tamin'ny 2006 ny zazavavy, saingy vao haingana ilay malaza. Ary, indrisy, zava-doza mahery vaika no nitarika ny voninahiny maneran-tany ...
Hitany fa maherin'ny 10 taona lasa izay dia hita fa voan'ny atidoha ny atidoha i Jasmine, ary noho ny fitsaboana tena izy dia tsy maintsy nijanona irery nandritra ny fotoana lava tao amin'ny rindrin'ny efitra efatra. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nirotsaka tamin'ny hoe fa, farafahakeliny, dia nitondra fifaliana sy fampiononana farafaharatsiny!
Etsy ankilany, nahatsikaritra ve ianao fa eo amin'ny molotr'i Jasmine dia misy sary malaza be Beyonce, toerana misy azy, eo amin'ny toerany? Avy eo dia nandany maherin'ny 4 ora tao amin'io asa io ilay tovovavy ary nampiasa lipstick 12 samihafa!
Oh, ary ity dia i Rihanna ao amin'ny lahatsary "Wild Thoughts"!
Afisy tsara indrindra ho an'ny sarimihetsika "Edward Scissorhands"!
Noho izany, raha jerena ny fitsaboana, Jazmina dia tsy nanintona ny molony fotsiny mba hahazoana fahafinaretana, fa nahavita nanao fianarana marobe maromaro mihitsy aza izy, satria heveriny fa anisan'ny lafiny lehibe amin'ity asa ity - profesionalism ary fifantohana amin'ny antsipirihany!
Fanehoana manintona ny "Alice in Wonderland", sa tsy izany?
"Matetika aho no mahatsiaro ho tsy afa-po amin'ny vokatr'izany, ary indraindray tsapako indraindray fa misy hevitra tsara mitatao eo anoloan'ny masoko", hoy ilay mpanakanto mpanao asa tanana. "Angamba mahafantatra ireo mpanakanto rehetra ireo ny fahatsapana. Fa eo am-pelatanana aho ary mitondra ny asa ho lavorary. "
Ary mijery io Titanic io, mino izany isika!
Tao amin'ny molotr'i Selena mpihira Jasmine, izay nahatonga an'i Amerika ho tia an'i Tehano.
Raha ny marina dia tsy tonga dia avy hatrany ny famoronana ny aterineto, ary matetika izy no nitomany noho ny fanehoan-kevitra sy fanakianana manafintohina. Saingy avy eo dia nahatsikaritra ny tenako manokana aho - mila mifantoka amin'ny tsara fotsiny ianao, ary hipoitra avokoa ny zava-drehetra. Ary ity ilay Joker ao amin'ny akanjony!
Lohahevitra nahafinaritra ho an'ny fitaomam-panahy - Cartes d'Disney!
Fantatrao ve ny sehatra epic avy amin'ny The Lion King?
Angano ity taona ity!
Ary izany dia mahagaga na majika!
Ny seho avy amin'ny "Beauty and the Beast" miaraka amin'i Emma Watson amin'ny lohateny dia manintona ny molony!
Saingy raha niasa tamin'ny sary mifototra amin'ilay sarimihetsika "Jaws" Jazzmina dia niaiky fa tsy ampy ny habeny ho azy ...
Ary fantatrao ve hoe firy ireo mpizarazara an-tserasera ankehitriny ao amin'ny pejy Instagram no manana mpanakanto mahatalanjona? Eny, efa mialona ireo kintana maro eran-tany izy, ary mendrika an'izany, satria izy irery ihany no mahita fa tsy mahazatra sy mahatsikaiky, toy ny, ohatra, toa an'i Elsa sy i Anna tamin'ny tsikitsiky iray!
10 famantarana fa manana parasy, ary 7 vokatra izay hanampy azy ireo hiatrika haingana
Saika ny toeram-pitsangatsanganana: ahoana ny fandehan'ny aretina ara-tsaina ao amin'ny clips
30 zazavavy izay tsy nanana fanaraha-maso ny momba azy ... eyebrows!
TOP 10 ny angano momba ny fanampiana voalohany, izay mety hitondra vokany mahatsiravina
12 momba ny fiainan'ny aty
Top 10 fitakiana fanadihadiana momba ny hatsaran-tarehy vehivavy manerana izao tontolo izao
Ahoana ny fomba fametrahana ny taovam-panananao amin'ny tananao manokana?
11 zava-misy mampihoron-koditra izay hampitsahatra ny fingotanao ny hoho
Inona avy ireo voankazo maina ahafahako mihinana raha mihena ny lanjany?
Ny lohataona amin'ny 2017 - lamaody lamaody, vaovao, fironana
Ny fototarazon'ny lymphoma eo amin'ny tendany dia mihalehibe
Nampiofanina izy ireo: antsoin'izy ireo hoe lakolosy mba hanome sakafo azy ireo
Lake of Piva
Taratasy misaraka amin'ny tanana manokana
Photoshoot amin'ny mpivady amin'ny ririnina
Toeram-pivoahana ho an'ny lalantsara
Fahaizana salady vita amin'ny menaka
Carp ao amin'ny Multivariate
Women's Jackets 2014
Mandarins - tsara sy ratsy
Volondava matevina eo ambanin'ny masony - reraka na aretina?
Nahoana no mahasoa ny vatana ny mouleur?